Umthandazo kwiSigramente Esikelelweyo. ? Yokudumisa, Ukucela uMmangaliso kunye neNdumiso
Umthandazo kuBasikeleleyo Luhlobo lokuba inkolo yamaKatolika ihlale ihlala ikho. Onke amakholwa kufuneka ayazi le mithandazo ukuze sikwazi ukuyenza naphina xa siyifuna.
Khumbula ukuba imithandazo sisixhobo esinokusisebenzisa ngalo lonke ixesha siziva siswele, asifanele sikwenze ngaphandle kokholo kodwa kufuneka siziva sinyanisekile entliziyweni yethu ukuba into esiyenzayo sisenzo sokomoya kwaye ngenxa yoko kufuneka ithathelwe ingqalelo ngononophelo. .
Lo mthandazo uyenziwa, kwiimeko ezininzi ukuhlawula ukunqula kwiNkosi yethu uYesu Krestu, ngokuqonda idini awalenzela uluntu emnqamlezweni weKalvari.
1 Ukuthandaza kweYona Ngcwele?
2 1) Imithandazo yokunqulwa kweyona ingcwele
3 2) Umthandazo kweyona ingcwele ukucela ummangaliso
4 3) Imithandazo yokudumisa esona sakramente siyingcwele
5 4) Umthandazo kwi-Sacramente eNgcwele ngaphambi kokuba ulale
5.1 Ngubani oyena ungcwele?
5.2 Ngaba ndingakhanyisa ikhandlela xa ndithandaza kweyona ingcwele?
Ukuthandaza kweYona Ngcwele?
1) Imithandazo yokunqulwa kweyona ingcwele
«Bawo ongunaPhakade, ndiyabulela kuwe ngenxa yakho infinito Uthando lundisindisile, nangaphandle kokuthanda kwam. Ndiyabulela, Bawo, ngokunyamezela kwakho okulindelekileyo kum. Ndiyabulela, Thixo wam, ngenceba yakho engenakulinganiswa nenceba kum. Umvuzo endinokukunika wona ukubuyisela konke ondinike kona bubuthathaka bam, intlungu yam nosizi lwam.
Ndiphambi kwakho, moya wothando, ukuba ungumlilo ongacimekiyo kwaye ndifuna ukuhlala ebusweni bakho obuthandekayo, ndifuna ukulungisa iziphoso zam, ndivuseleleke emphefumlweni wokuzinikezela kwam kwaye ndinike imbeko yam yendumiso nokudumisa.
Usikelelekile uYesu, ndiphambi kwakho kwaye ndifuna ukukha inyambalala engenakubalwa yeentliziyo zakho, ndiyabulela kum nakuyo yonke imiphefumlo, kwiCawa eNgcwele, abefundisi bakho nabezenkolo. Vumela, Owu Yesu, ukuba ezi yure ziiyure ngokwenene zokusondelana, iiyure zothando endizinikiweyo ukuba ndizuze zonke izigciniba endigcinelwe yiNtliziyo yakho yobuthixo.
Ntombi Enyulu ,Mama kaThixo kunye noMama wam, Ndiyakujoyina kwaye ndiyakucela ukuba ubandakanye kwiimvakalelo zentliziyo yakho engachazekiyo.
Thixo wam! Ndiyakholelwa, ndiyakuthanda, ndiyathemba kwaye ndiyakuthanda. Ndicela uxolo kwabo bangakholwayo, abanquli, abalindi kwaye abayithandi.
Oyena Thixo Ungcwele ungcwele, uYise, Nyana noMoya oyiNgcwele, ndiyakuthanda kakhulu kwaye ndikunika eyona nto ixabisekileyo, iGazi, uMphefumlo kunye nobuThixo beNkosi yethu uYesu Krestu, obukhoyo kuyo yonke iTabernakele lehlabathi, ekubuyekezeni konke ukucaphuka, ukungcwalisa kunye nokungakhathali athi naye ngokwakhe akhubeke. Kwaye ngokulunga okungenasiphelo kweyona Ntliziyo yakhe ingcwele kunye nentliziyo engafezekanga kaMariya, ndicela inguquko yaboni abahluphekileyo.
Umthandazo wokunqula kweyona ingcwele ibonisa ukuzinikela okuvela entliziyweniKungenxa yoko le nto lo mthandazo ubaluleke kakhulu kuba kuwo asizukubuza nto ikhethekileyo kodwa siya kuba sinikezela kuphela kwintliziyo yethu kulowo usifaneleyo ngentliziyo eguqukayo nethobekileyo njengoko sifundisiwe kwilizwi likaThixo.
Ukudunyiswa, oko kwenziwa ngokusuka entliziyweni nangokunyaniseka sisixhobo esinamandla kakhulu kwicandelo lokomoya.
2) Umthandazo kweyona ingcwele ukucela ummangaliso
«Oyena Bawo Ungcwele waseZulwini
Ngenxa yedini lothando olwenzileyo, ngokufela izono zethu
Yiyo loo nto ke ndikuqonda njengeNkosi yam, kwaye inguMsindisi kuphela
Namhlanje ndifuna ukubeka uBawo wam endimthandayo phambi kwakho, ubomi bam
Uyayazi into endikuyo, nendlela endizithoba ngayo phambi kwakho
Bawo ilizwi lakho lithi ngamanxeba akho saphiliswa
Kwaye ndifuna ukwenza eso sithembiso, ukuze undiphilise
Nkosi ndiyakucela ukuba usezandleni zeengcali ezinamatyala am
Ukuba umnike izicwangciso ezifanelekileyo ukuze bakwazi ukundinceda
Ukuba yeyona ntando yakho ingcwele Bawo
Dlulisa isandla sakho sokuphilisa phezu kwam, kwaye uhlambulule umzimba wam kuko konke ukungcola
Susa konke ukugula kwiseli nganye
Ndibuyisele impilo yam
Ndiyakucela, Bawo Oyingcwele
Ngamana ungathoba indlebe yakho ukuyiva imithandazo yam
Kwaye ubuso bakho boThixo bufumane ububele phambi kwam
Ndiqinisekile ukuba uyivile imithandazo yam
Kwaye, ewe, uyaphilisa
Ngaba uyabufuna ubukho bukaThixo ebomini bakho? Emva koko kufuneka uthandaze Oyena Mthandazo ungcwele ukuze ucele ummangaliso.
Lo mthandazo uya kukunceda ufezekise ummangaliso. Nokuba kulula okanye kunzima, umthandazo uya kusebenza nje.
Thandaza unokholo olukhulu entliziyweni yakho kwaye usoloko ukholelwa kumandla kaThixo weNkosi yethu.
3) Imithandazo yokudumisa esona sakramente siyingcwele
«Ndifumana lo mhla ukukhanya, uxolo nenceba
Ndifumana umzimba kaYesu nomphefumlo
Ukuze ubomi bam bugcwale ngumbulelo, ulangazelelo, ulonwabo,
I-Charisma kunye nokuzinza ngaphambi kokundwendwela kwakho;
Ndingene ngaphakathi kwam
Ndibambe ukholo olungcwele olundivumelayo
Hlala ujongene namaxesha obunzima;
Ndonwabela ubumnandi benkampani yezulu
Ngaphambi kohambo kobu bomi bam ukuba
Inongwe ngeyona nto ingcwele.
Ndithatha le sakramente emphefumlweni wam
Kwaye ndiyamkela ngenceba, ngenceba nangothando.
Uxolo lwomoya malube nathi sonke
Kwaye ukuba ikhethini lobumnyama limka xa
Ukholo lwam luyabonakala.
Yiba nokholo kulo mthandazo wokudumisa esona sakramente sesona sibalulekileyo.
Ukudumisa kukuphakanyiswa okwenziwa ngokusuka entliziyweni kunye nokwazi kokwazi ukuba akukho mntu unje ngomntu. Kule meko ke sidumisa uYehova, kumkani wookumkani owazinikelayo ngenxa yothando. Ukunyamezela kwakhe iintlungu kunye nokuthotywa ukuze thina namhlanje sinandiphe inkululeko yokwenene kuye.
Ukudumisa yinxalenye ebalulekileyo yemithandazo yemihla ngemihla esingakwaziyo ukuyihoya kuba kufuneka siwabone rhoqo amandla eNkosi ebomini bethu.
4) Umthandazo kwi-Sacramente eNgcwele ngaphambi kokuba ulale
«Owu Yesu oNgcwele! ukuba ebusuku ulilolo kwiindawo ezininzi zehlabathi, ngaphandle kwazo naziphi na izidalwa zakho eziya kukutyelela zikunqule.
Ndikunikela ngentliziyo yam ehluphekileyo, ndinethemba lokuba zonke izingqisho zayo zininzi njengothando kunye nokuqubuda. Wena, Nkosi, uhlala uphaphile phantsi kohlobo lweSakramente, uthando lwakho olunenceba aluze lulele okanye ludinwe lokujonga aboni.
Owu Yesu onothando kakhulu, Owu Yesu yedwa! Yenze intliziyo yam ibe njengesibane esivuthayo; Ekuthandeni uthando malungabi naluhlobo luhlala luvutha eluthandweni lwakho. Jonga oh! Umthumeli kaThixo
Bukela eli lizwe lilusizi, kubabingeleli, kwimiphefumlo engcwalisiweyo, elahlekileyo, kwabahluphekayo abagulayo, abo ubusuku obungenasiphelo bafuna amandla akho kunye nentuthuzelo yakho, ukufa kunye nala mkhonzi wakho uthobekileyo okusebenzela ngcono uphumle kodwa ungahambi isuka kuYe, kwiTabernakele lakho ... apho uhlala khona wedwa kwaye uyithule ebusuku.
Kwangathi Intliziyo Engcwele kaYesu ingahlala isikeleleka, idunyiswa, ithotyelwa, ithandwa kwaye ihlonitshwa kuyo yonke iTabernakele yehlabathi. Amen. "
Lo mthandazo kwiSigramente Esikelelweyo kunye neSigramente Esikelelekileyo ngaphambi kokulala yenye yezona zinamandla kuzo zonke.
Ngaphambi kokulala kubalulekile ukwenza umthandazo okanye sithandaze kwi-Sacramenti eNgcwele ekhethekileyo ukusinceda ukuba siphumle ngokuzola ngokupheleleyo. Ukuphakamisa umthandazo kweyona sakramente ingcwele ngaphambi kokulala yinto ekufuneka siyenzile imihla ngemihla kwaye, ukubethelela lo mkhwa ebantwaneni kubaluleke kakhulu.
KwiCawe yamaKatolika lo ngomnye weyona mithandazo ibalulekileyo njengoko iqinisa ukholo lwe inkolo yamaKrestu kwaye womeleza umoya.
Ngumthandazo we ukuqonda, indumiso y Unqulo lukaYesu nedini lakhe ngenxa yoluntu. Siyazi ukuba imithandazo ihlala izisa izibonelelo ebomini bethu ngoba ngayo siyakomeleza kwaye sikugcwalisela ngoxolo, yiyo loo nto ke kufuneka ubomi bokuzibandakanya neNkosi.
Ngubani oyena ungcwele?
Eyona sakrament ingcwele sisenzo sokholo esenziwa kwicawa yamaKatolika apho samkela kwaye samkela idini leNkosi uYesu Krestu. Esi senzo sihlala senziwa ngeCawa yesithathu yenyanga nganye apho kuye kucalulwe khona ukuze amakholwa akwazi ukuphakamisa inkolo yawo.
Umgcini ozinikeleyo luphawu lomzimba ka Krestu owaphanziswa ngenxa yezono zethu ngenxa yothando lomntu kwaye kunyanzelekile ukuba onke amakholwa abenalo olu lwazi ukuze azinikele kunqulo phambi kweNkosi.
Ngaba ndingakhanyisa ikhandlela xa ndithandaza kweyona ingcwele?
Impendulo nguyebo, ukuba amakhandlela anokucinywa xa uthandaza. Nangona kunjalo, oku akunyanzelekanga njengoko imithandazo inokwenziwa nangaliphi na ixesha kwaye nendawo kwaye asinakusoloko sikhanyisa ikhandlela ukuze sithandaze. Amakholwa amaninzi ahlala esenza izibingelelo ezizodwa kwabo bangcwele babo apho banamakhandlela akhanyisa ngamaxesha athile njengomnikelo wokunqula.
Kwimeko yemithandazo kwaye kuso sonke isenzo sokomoya ukholo lwabo lwenziwa lubaluleke kakhulu kuba kulapho ukusebenza kwabo kulele khona.
Ilizwi leNkosi lisifundisa ukuba asinakuphakamisa imithandazo sinengqondo igcwele ukuthandabuza okanye sicinga ukuba into esiyicelayo inzima kakhulu ngoba ke umthandazo iba yinkcitho yexesha apho singasayi kufumana zibonelelo.
Ndiyathemba ukuba uwonwabele umthandazo kwi-Sacrament eNgcwele. Yiba noThixo
IPoderosa umthandazo wentsikelelo